Izikebhe ezingama-8 lapho ungajabulela khona ukushibilika e-Madrid ngoKhisimusi | Izindaba Zokuhamba
Izikebhe eziyi-8 zokujabulela ukushibilika e-Madrid ngoKhisimusi
Maria | | Impelasonto, Ukuzilibazisa
Kulo Khisimusi, imindeni eminingi ifuna ukusizakala ngamaholide ezingane zayo ukwenza izinhlelo ezihlekisayo nezingafani ndawonye. Futhi yini enye iChristmassy engaphezu kweskating skating?
Njengonyaka, iMadrid ifaka izingcezu eziningana zeqhwa ezingxenyeni ezihlukene zedolobha kulabo abafuna ukujabulela usuku lukaKhisimusi lwezemidlalo ngaphandle. Kodwa-ke, kukhona namathrekhi amaningana avuliwe unyaka wonke. Njengokusha, izifundo zesingeniso zihlelelwe ukuze abancane bathole ukunambitheka kokushwibeka.
1 ICibeles Palace Crystal Gallery
2 IColumbus ice rink
3 IVilla de Vallecas ice rink
4 IVicálvaro ice rink
5 IPlaza de la Luna ice rink
6 IBerlin Park ice rink
7 Amaphupho E-Ice Palace
8 I-leganés ice rink
ICibeles Palace Crystal Gallery
ICentroCentro Cibeles iba yindawo ekahle yokujabulela ukushibilika eqhweni layo elingaphakathi kweCrystal Gallery yalesi sakhiwo. Ngesikhathi sikaKhisimusi 2017, noma ngubani ofisa angaya ePlaza de Cibeles eMadrid ukuyokwehlisa ithrekhi yayo engama-400 m2 eduze kwesihlahla esikhulu sikaKhisimusi.
ICentroCentro Cibeles izophinde isingathe uhlelo olubanzi lokuxoxa izindaba kanye nemihlangano yokufundisana ngobuciko. Okwamanje, asebekhulile bazokwazi ukuphumula futhi bathole amandla endaweni yokudlela yaseCrystal Gallery.
Ukungena kule ice rink kubiza ama-euro ayisithupha ukuqasha okokusebenza kanye nemizuzu engama-6 yokushushuluza. Kuzovulwa kusukela ngoDisemba 30 kuya kuJanuwari 21.
IColumbus ice rink
Kufakwe amarinki amabili e-ice skating skating ku-Plaza de Colón e-Madrid. Zombili zigqugquzelwe ngamarinki aziwayo eRockefeller Center eNew York noma i-ice rink eMuseum of Natural History.
Ukungena kule ice rink etholakala eDiscovery Gardens kumahhala futhi banikeza nethuba lokuthola izifundo zokuqala zokushushuluza. Phakathi kukaDisemba 14 noJanuwari 7 ungajabulela usuku ngaphandle nomndeni wonke osenhliziyweni yeMadrid.
IVilla de Vallecas ice rink
Le ndawo yaseMadrid nayo isungule i-ice rink yayo ngoKhisimusi, etholakala ePaseo Federico García Lorca futhi ine-104 m2. Eduze kwalo, kufakwe idokodo lokufunda ukukhuthaza lo mkhuba omnandi phakathi kwezingane ezinesinyathelo esithi «Skating on Letters». Leli dokodo linezincwadi ezingaphezu kwe-1.500 ezisatshalaliswe kokungaphezu kuka-90 m2 ngobubanzi bezinhlobonhlobo ezahlukahlukene kakhulu ngokwezinhlobo zemibhalo. Uma nje uKhisimusi usuphelile, zonke lezo zincwadi zizonikelwa emitatsheni yezincwadi yomphakathi yaleli dolobha.
Kungenwa mahhala e-Villa de Vallecas ice rink futhi kuzohlala kuvuliwe kusuka ngoDisemba 1 kuya kuJanuwari 8.
IVicálvaro ice rink
Ezinkundleni zemidlalo zaseVicálvaro, kulo Khisimusi kufakwe i-ice rink ezojabulisa izingane nabazali, ngoba imahhala. Ngaphezu kwalokho, njenge-Colón rink eVicálvaro, banikela ngezifundo zokuqala ze-ice skating. Labo abafuna ukuza bazame bangakwenza lokho phakathi kukaDisemba 11 noJanuwari 7.
IPlaza de la Luna ice rink
Maphakathi neMadrid, eduze kwaseGran Vía, kunePlaza de la Luna ice rink. Ithikithi lehora elilodwa libiza ama-euro ama-5, ngaphandle kweMigqibelo, amaSonto namaholide, okubiza ama-euro ayi-7,50. Ukushushuluza kuyadingeka ukusebenzisa amagilavu, athengiswa kuthrekhi uqobo ngama-euro amabili. IPlaza de la Luna ice rink izovulwa ngoKhisimusi wonke phakathi kuka-10 ekuseni no-22 ebusuku.
IBerlin Park ice rink
Phakathi kukaDisemba 9 noJanuwari 7, leli paki laseMadrid lizosingatha i-200 m2 yokushibilika eqhweni kunoma ngubani ofuna ukujabulela ukwenza umdlalo othile kula maholide. Phakathi nesonto, ithikithi lithengiswa ngama-euro ama-5 ngenkathi impelasonto ibiza ama-euro ayi-7,50 kanti ukuqashwa kwama-skate kufakiwe entengo.
Amaphupho E-Ice Palace
Itholakala ngaphakathi enxanxatheleni yezitolo enkulu, le ice rink ivuliwe unyaka wonke futhi ilungele iHockey, ukushushuluza ngomlingiswa, ukwenza iphathi yosuku lokuzalwa noma ukuthatha izifundo ezithile zokushushuluza. Inobukhulu obungu-1800 m2. Ukushushuluza kuyadingeka ukugqoka amagilavu ​​futhi izindleko zokungena ziphakathi kuka- € 7,50 no- € 15,50 kuye ngamahora noma uma sifuna ukuqasha izikeyiti.
I-leganés ice rink
Nge-1450 m2 yayo, le rink yeqhwa ingenye yezindawo ezinkulu kakhulu eMadrid zokushwibeka. Kuvulwe unyaka wonke futhi kunesici esikhethekile abanikeza ngaso amakilasi okushushuluza. Izintengo zamathikithi zizungeze ama-6,50 noma ama-7,50 euros ngokuya ngosuku nesikhathi.
Lezi ngezinye zezindlela zokushwibeka eqhweni ngesikhathi sikaKhisimusi ezikhona eMadrid. Yini oyithandayo ukushibilika ngesikhathi samaholide?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Impelasonto » Izikebhe eziyi-8 zokujabulela ukushibilika e-Madrid ngoKhisimusi
Amahostela eNew York
Qala unyaka eParis ngalesi sipho esincane